Isebenza njani iPinterest nge-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Isebenza njani iPinterest nge-Instagram?
Namhlanje ngokufakwa kwidijithali ngokusemandleni, kukho amakhulu amathuba abantu okuba thatha izithuba ze-intanethi kwaye uhlale usebenza ngokuzeleyo ebusweni bento enokwenzeka ngaphakathi kumaqonga ngokwawo. Ngokuqinisekileyo esi sisicwangciso sokuthetha esidumileyo nesifunwayo kula maxesha akutshanje ukufezekisa izibonelelo ezingazange zibonwe ngaphambili.
Ngexesha lokuhlaziywa kwehlabathi, kunokwenzeka ukuba izinto zitshintshe zithathe ikhosi entsha emiselweyo apho yonke into isebenza ngombane. Ke ngoko, licebo elilungileyo ukwazi izinto ezinokuba phezulu kwinguqu kwindiza yedijithali kwaye ufumane iziphumo ezingcono nezingcono.
Nokuba yeyenkampani, okanye umntu wendalo, kuyafuneka ukuba kusetyenziswe iindlela ezithile eziza kuba negalelo kwimpumelelo epheleleyo ukufumana ingeniso yezoqoqosho. Kuyenzeka ukuba iinjongo zokuqala zenziwe zaziwe ezitsala umdla wabasebenzisi kwaye zifezekise abasebenzisi bezinto eziphilayo.
Izibonelelo zokugcina iPinterest inxulunyaniswa ne-Instagram
Nangona kungenakucingelwa ukuba kunokwenzeka, iPinterest luluvo olusebenzayo lokuba ukuba uqhagamshele ngokutyibilikayo, kunokwenzeka ukuba baya kuqhubeka ubudlelwane phakathi kweli qonga kunye ne-Instagram ukufezekisa iziphumo ezingcono ezifaka umnxeba wentengiso yendalo.
Ezi ndidi zezicelo zinokuvelisa inzuzo kwixesha elifutshane, eliphakathi nelide ngaphandle kwesidingo sokuphulukana nabathengi ngelixa kusenziwa iinzame. Kuthekani ukuba ungaphoswa ngamathuba afumanekayo kwiphepha.
Zombini ezi ziqulatho zinokuba yintsholongwane
Enye yezinto ezintle abanokuthi bazi ngazo abasebenzisi kukukwazi ukwazi ukuba zithini na izinto ezibhalwe ngala maqonga mabini. Nangona kunjalo, into ebalulekileyo yile soloko unomanyano kunye nomba ophambili.
Gcina unxibelelwano olupheleleyo
Abasebenzisi bafuna ukufumana iimpendulo kumathandabuzo abo kwaye elinye lawona manyathelo aphambili ngokungathandabuzekiyo ineembono oza kuziphakamisa kubo kumaqonga abo. Ke ngoko, ukuba abazi nto inye, banokuya kwenye ngexesha elithile.
Ukulungiselela nawuphi na umngcipheko
Ngaphandle kwento yokuba zidityanisiwe, la maqonga mabini acela iikhowudi zengeniso ukuze bakwazi ukuthatha inxaxheba kwimisebenzi ecetywayo nganye nganye. Ngale ndlela, iiakhawunti zinokuvalwa kwaye utshintshe izitshixo ukuze ufumane isibonelelo sokungabinayo ilahleko kunye neenzame.
Ungayidibanisa njani iPinterest kunye ne-Instagram?
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba umanyano phakathi kwamaqonga omabini lithuba elilodwa yamkela yonke into ekhoyo kwihlabathi lanamhlanje. Nangona kunjalo, ikwalombono olungileyo ukufunda inyathelo ngenyathelo malunga nendlela abanokudityaniswa ngayo.
Qhagamshela ngokhetho: "I-Pinterest yeenkampani" iiprofayili
Emva koko ungene kubo bobabini kwaye ungeze umsebenzisi
Yabelana ngeposi okanye ipini kunye nomnye
Ngale ndlela, unokwenza unxibelelwano lwamaphepha kwixesha lokurekhoda ukuze ufumane amakhulu ukhetho kwindawo yokwabelana ngezimvo. Oku kuthatha iitekhnoloji zanamhlanje inyathelo elingaphezulu.
1 Izibonelelo zokugcina iPinterest inxulunyaniswa ne-Instagram
1.1 Zombini ezi ziqulatho zinokuba yintsholongwane
1.2 Gcina unxibelelwano olupheleleyo
1.3 Ukulungiselela nawuphi na umngcipheko
2 Ungayidibanisa njani iPinterest kunye ne-Instagram?
Uyenza njani into yokhetho olukhutshelweyo kwiYouTube?